Maxay cayaartooyda Afrika ugu dhex dhuuntaan dalalka reer galbeedka? - BBC News Somali
Image caption Petit Minkoumba oo Cameroon u dhashay ayaa kamid ah cayaartooyda la waayay
Ugu yaraan 13 cayaartooy oo u dhalatay dalka Cameroon ayaa ka goosatay kooxdooda xilli ay ka qayb galaayeen cayaaraha Barwaaqa-Sooranka ee dalka Austaralia ka socday.
Inta badan cayaartooyadani ayaa la sheegay in la waayay.
Kooxda qabanqaabada cayaaraha ayaa waxay sheegeen in cayaartooy kale oo kasoo jeeddo dalalka kala ah Uganda, Sierra Leone iyo Rwanda iyagana la waayay.
Tani ma ahaan markii ugu horreysay oo koox caalami ah oo matalayso dal Afrikaan ah la waayo.
Inta badan cayaartooyda Afrikaanka ah ayaa la sheegay inay yihiin kuwo nolol wanaagsan doon ah.
Sannadkii 2006 ayay ahayd markii 40 cayaartooy iyo saraakiishooda oo ka qaybgalaysay cayaaraha Baarwaaqo-sooranka magaalada Melbourne la waayay, halka qaarna ay wakhtiga dheeresteen, halka kuwo kalenna ay qaxootinimo isku dhiibeen.
Waxaa kale oo jirtay 26 cayaartooy oo Afrikaan ah in la waayay xilli ay ka qayb galaayeen cayaaro ka socday magaalada Manchester sannadkii 2002.
Image caption Arcangeline Fouodji Sonkbou waxaa uu kamid yahay feeryahannada maqan
Cayaarihii London ee 2012, 21 cayaartooy iyo tabbabarayaashooda ayaa goostay islamarkaasna qaar badan oo kamid ah weli aan la hellin halka ay jiraan.
82 cayaartooy oo kale, tabbabaryaal iyo wufuud olimbikada ka socotay ayaa isku diiwaan geliyay qaxootinimo xilli ay socdeen cayaarihii UK.
Waxay lamid ahayd dhacdadii sannadkii 2000 cayaarihii magaalada Sydney oo ay in ka badan 100 cayaartooy wakhti dheerad ah ay iska darsadeen fiisahooda.
Dhacdadii ugu darnayd ayaa waxay ahayd, sannadkii 2011 markii dhammaan cayaartoyda xulka Senegal la waayay xilli ay ku sugnaayeen hoteel ay ka deganaayeen dalka Faransiiska islamaarkasna loo malaynaayay inay qaxootinimo ka dalbanayaan Faransiiska mise inay u gudbaan Ingriiska.
Marka la eego, goosadka cayaartooyda Cameroon ee ka qaybgalaayay cayaaraha Australia,waxay qabanqaabiyaasha sheegayaan inay diradda saari doonan in kooxda ay ka caawiyaan sidii loo baadi goobi lahaa cayaartooyda la waayay.
Dowladda Australia ayaa uga digtay cayaartooyda inay wakhti dheeri ku darsadaan muddada fiisahooda loogu asteeyay.
Guddiga cayaaraha Barwaaqo-sooranka waxay sheegeen inay dusha kala socon doonan xaaladda cayaartoyda balse ay xaq u leeyihiin inay ku safraan fiisahooda si xor ah.